May 2021 - Channel Lover
ခြေသလုံးတုတ်နေတာကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်း သွယ်လျသွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း(၆)မျိုး
May 31, 2021 by Channel Lover
ခြေသလုံးတုတ်နေတာကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်း သွယ်လျသွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း(၆)မျိုး သွယ်လျတဲ့ ခြေတံလေးတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပကို ပိုလှအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး စကတ်ပဲဝတ်ဝတ်၊ ဘောင်းဘီပဲဝတ်ဝတ် အမြဲ ကြည့်ကောင်းနေစေပါတယ်။ ခြေသလုံးတုတ်နေတဲ့အခါ ဘာဝတ်ဝတ်မလှဘူးလို့ထင်နေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု လျော့နည်းနေတတ်ပါတယ် ခြေသလုံးတုတ်နေလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမလျော့နည်းရအောင် ၊ သွယ်လျတဲ့ခြေတံလှလှလေးတွေရဖို့ အခုဖော်ပြမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပြုလုပ်လိုက်ပါနော် …။ (၁) ခြေဖျားထောက် လမ်းလျှောက်ခြင်း” ခြေဖျားထောက်ပြီး လမ်းလျှောက်တာက ခြေသလုံးကိုသွယ်လျစေပါတယ်။ ခြေဖျားထောက်လမ်းလျှောက်တာကို တစ်မိနစ်လောက်လုပ်ပြီး တစ်မိနစ်လောက်နားပါ။ အဲ့ဒါကို ငါးခေါက်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ …။ (၂) အလေးတုံးကိုင်ပြီး ခြေဖျားထောက်ခြင်း” လက်နှစ်ဖက်က အလေးတုံး ဒါမှမဟုတ် အလေးချိန်ပါတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို လက်ကကိုင်ပြီး နေရာမှာခြေစုံရပ်ကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်တပြိုင်တည်း ခြေဖျားထောက်ပေးပါ။ အဲ့ဒီအနေအထားမှာ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်နေပြီး ခြေထောက်ကိုပြန်ချပါ။ အဲ့ဒါကို … Read more
ဆန်ဆေးရေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ဖြစ်အောင် လျှော်ကြည့်ပါ ဆန်ဆေးရေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ကြမယ် ဆန်ဆေးရေ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားတဲ့ဆန်ကို ထမင်းအဖြစ်မချက်ခင်မှာ ရေနဲ့ ဆန်ကို ဆေးရာကနေ ရတဲ့ ရေပါ။ကျွန်တော်တို့ အတော်များများကတော့ ဆန်ဆေးရေကို သွန်ပစ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် ရှေးယခင်ကတည်းက ဆန်ဆေးရေရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကိုသိပြီး ဆန်ဆေးရေကို အလှအပအတွက်သုံးခဲ့တဲ့ လူတွေလည်းရှိပါတယ်။သုတေသနပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Heian ခေတ် (794 AD – 1185) မှာ ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆံပင်အရှည်ဟာ ခေါင်းကနေ ခြေဖျားထိရှိပြီး ဆံသားကလည်းကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့လိုဆံပင်ရှည်ပြီး ဆံသားကောင်းဖို့ကို ဆန်ဆေးရည်နဲ့ ခေါင်းလျှော်ခဲ့ကြတယ်လို့ သုတေသနပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။အဲ့ခေတ်ကာလက တော်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ တချို့တွေအနေနဲ့ ယုံချင်မှ ယုံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် … Read more
သွေးတိုးရှိသူများ သိထားသင့်တဲ့ နှစ်မိနစ်အတွင်း သွေးတိုးကျစေမယ့်နည်း
သွေးတိုးတာဟာ ဘယ်သူမှမခံစားချင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးငယ်မရွေးဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ သွေးတိုးရောဂါဟာ လုံးဝအရှင်းပျောက်အောင် ကုသဖို့နည်းလမ်းမရှိသေးတဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်ပြီး အမြဲလိုလိုသတိထားပြီး ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ သိထားသင့်တာလေးတွေနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း သက်သာအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါလက္ခဏာများ ခေါင်းကိုက်ခြင်း သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူတွေဟာ မကြာခဏခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့အကျင့်မျိုးမရှိဘဲ သွေးတိုးလာတော့မှသာ ရုတ်တရက်ခေါင်းတွေတအားထိုးကိုက်တတ်တာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ခေါင်းကိုက်လေ့မရှိဘဲ နေရင်းက ရုတ်တရက်ခေါင်းတွေထိုးကိုက်လာတာမျိုး၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံတာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်တော့ သွေးတိုးရှိမရှိစစ်ကြည့်ဖို့လိုနေပါပြီ။ မျက်လုံးထဲမှာ သွေးကြောပြတ်ရာလေးတွေတွေ့ရခြင်း၊ ရုတ်တရက်အမြင်တွေေ၀၀ါးခြင်း သွေးဖိအားရုတ်တရက်များလာခြင်းဟာ မြင်လွှာမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပြီး မျက်လုံးရဲ့ဆုံချက်ကို ကမောက်ကမဖြစ်သွားစေနိုင်တာကြောင့် ရုတ်တရက်အမြင်အာရုံေ၀၀ါးသွားတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်လုံးမှာ သွေးကြောပြတ်ရာလေးတွေဖြစ်ပြီး အမြင်အာရုံတွေေ၀၀ါးနေရင် သွေးတိုးရောဂါရှိမရှိ အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်မှာ နှလုံးအရမ်းခုန်ခြင်း လမ်းမြန်မြန်လျှောက်တာမျိုး၊ ပြေးတာမျိုးနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ နှလုံးအရမ်းခုန်ပြီး နားထဲမှာပါ; တဒုန်းဒုန်းဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ သွေးတိုးရောဂါအခံရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ချက်ချင်းစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုနေပါပြီ။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ သွေးတိုးရှိနေတာကို … Read more
၃၁.၅. ၂၀၂၁ ရကျနေ့ ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနဈ တိုငျးတှာခကျြ မိုးရှာသှနျးမယျ့ပွညျနယျမြား
၃၁.၅. ၂၀၂၁ ရက်နေ့ ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနစ် တိုင်းတွာချက် မိုးရွာသွန်းမယ့်ပြည်နယ်များ နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနစ် မြန်မာတစ်ပြည်လုံး မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေ ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် တိမ်ထူ ထပ်နေပြီး ကျန်တစ်ပြည်လုံးမှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်(၁၄)နေရာအတွက် မနက်ဖြန်နံနက် အထိမိုးရွာသွန်းနိုင်မှု ခန့်မှန်းချက် ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းတွင် နေရာစိပ်စိပ် ကျန်နေရာများမှာ နေရာကျဲကျဲ၊ မိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ် နေရာကျဲကျဲ၊ မိုးအနည်းငယ် ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းတွင် နေရာစိပ်စိပ် ကျန်နေရာများမှာ နေရာကျဲကျဲ၊ မိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ နေပြည်တော်တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မိုးထစ်ချုန်း … Read more
“နိုငျငံခွားတှငျ ၃ နှဈကွာသှားရောကျ အလုပျလုပျကိုငျနခေဲ့ပွီး မိဘနှဈပါးအား အသိမပေးပဲ အိမျပွနျလာပွီး ပြျောရှငျစခေဲ့သော သားလိမျမာလေး”
လူရယျလို့ဖွဈလာလြှငျ အလုပျဆိုတာ လူတိုငျးမှာ ရှိသငျ့ပွီး အမြားစုကတော့ နယျဝေးရပျခွားတှငျ မိသားစုမြားနှငျ့ ခှဲကာ ဝငျငှရေရနျ အလုပျသှားရောကျ လုပျကိုငျကွသညျ။ ထိုသို့ အဝေးမှာ အလုပျလုပျကိုငျနသေူမြားအဖို့ မှေးရပျမွမှေ ကနျြရဈခဲ့သော မိသားစုမြားမှ သတိရ စိတျပူကွသလို ကိုယျကိုယျတိုငျကလညျး အိမျကို လှမျးဆှတျ သတိရပွီး အမွနျဆုံးပွနျလာခငျြကွမှာ အမှနျပါ။ ယခုအခါတှငျလညျး ဗီယကျနမျနိုငျငံမှ လူငယျတဈဦးသညျ မိဘနှဈပါးနှငျ့ခှဲကာ စားဝတျနရေေးအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံသို့ ၃နှဈကွာသညျထိ သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျခဲ့သညျ။ ဖုနျးနှငျ့သာ အဆကျအသှယျလုပျခဲ့ပွီး အလုပျကွိုးစားခဲ့ပွီးနောကျ တဈနတှေ့ငျ ကောငျလေးသညျ အိမျသို့ပွနျလာရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ရာ မိဘနှဈပါးအား အံ့အားသငျ့သှားအောငျ အကွောငျးမကွားပဲ အပွီးပွနျလာခဲ့သညျ။ အိမျသို့ရောကျသောအခါ ဖခငျနှငျ့ တှရှေိ့ပွီး အကွောငျးမကွားပဲ ပွနျလာသညျဟု ဆိုကာ ငယျငယျတုနျးကလို ပှဖေ့ကျမတငျ လိုကျပွီး မိခငျဖွဈသူရှိရာ ဈေးထဲသို့ … Read more
သငျ့ရဲ့အဈမကို ပွောဖို့မနေ့ခေဲ့တဲ့ ကြေးဇူးတငျစကား….အခုပဲပွောလိုကျပါ
Zawgyi အစ်မတစ်ယောက်ရှိတာဟာ ကံကောင်းခြင်းဖြစ်သလို၊ အားလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်မှာ အစ်မရှိခြင်းက သင့်အတွက် အရာရာကိုပိုအဆင်ပြေစေပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အစ်မကြီးကို အခုလိုမျိုး ကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေ ပြောလိုက်ပါ။ (၁) ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ အတူတူရှိနေပေးလို့ ၊ အားပေးဖေးမပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၂) ရင်ဖွင့်သမျှကိုနားထောင်ပေးလို့၊ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို သိမ်းဆည်းထားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၃) မွေးလာတဲ့အချိန်ကစပြီး အခုချိန်ထိအနောက်ကနေရပ်တည်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၄) ရန်ဖြစ်လိုက်၊ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ မွေးချင်းတွေရှိခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကို နားလည်စေခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၅) အလှအပနဲ့ တခြားသိသင့်တဲ့အရာတွေကိုသိအောင် သင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၆) အရာရာကိုဝေမျှပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၇) ဘဝတလျှောက်လုံးရယ်မောအောင်လုပ်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၈) အပေါ်ယံမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပဲ ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (၁၀) တခါတရံမှာ အပြန်အလှန်အပြစ်တင်တာမျိုးရှိပေမယ့် … Read more
နာမညျမှာ “သ´´ ပါတဲ့သူတှကေ စိတျကွီးတယျဒေါသဖွဈလာရငျ ဘယျသူကိုမှဘယျအရာကိုမှ ထညျ့မစဉျးစားဘူးထညျ့လဲ မတှကျတတျဘူး ဒါပမေယျ့ ပွောပီး လုပျပီးသှားလို့သူမှားနတေဲ့ကိစ်စကိုလဲပွနျတောငျးပနျဖို့ဝနျမလေးတတျကွဘူး။ စိတျနာအောငျတော့ လာမလုပျနဲ့သတေဲ့အထိ မှတျထားတတျတယျအငွိုးအတေးလဲ ကွီးတယျ အပျေါယံခငျမငျတာ မလိုလားဘူးသူငယျခငျြး အစဈပဲ လိုခငျြကွတယျယောငျလို့တောငျနာမညျမှာ`သ´ပါတဲ့သူကိုအရှဲ့မတိုကျမိစနေဲ့သူမြားတှေ ရှဲ့တာထကျအဆပေါငျးမြားစှာ ပွနျရှဲ့တတျတယျ။ သနားအောငျပွောလာရငျအိတျထဲရှိတဲ့ ပိုကျဆံကိုယျ မသုံးရရငျ နပေါစပေေးပွဈတတျတယျ’မပေးခငျြဘူး ကွညျ့မရဘူးဆိုရငျအဲ့လူဘာဖွဈနပေါစလှေညျ့ကို မကွညျ့တော့ဘူး လိမျတာ ညာတာ အရမျးမုနျးတယျဒါပမေဲ့ သူငယျခငျြးမြား အပျေါမှာတော့ ဟာသတှေ ရယျစရာတှပွေောပွီးစနောကျတတျကွတယျအနအေေးတယျ။ တခွားသူတှကေိုဆို ပွုံးပွဖို့ မပွောနဲ့မကျြနှာထားက ခပျတညျတညျနဲ့တလောကလုံးသူ့လုပျစာ စားနကွေတဲ့အတိုငျးပဲ ဘာပဲလုပျလုပျအမြားအတှကျပဲ ကွညျ့တတျတယျတဈကိုယျကောငျး မဆနျတတျကွဘူး။ ဒါပမေဲ့ မထငျရငျ မထငျသလိုလညျးပွောတတျတဲ့ အကငျြ့ကလညျး ရှိသေးပွောရမယျဆိုနာမညျမှာ`သ´ပါတဲ့သူတှဟောမဟုတျမခံ ပေါငျးရသငျးရခကျပွီးစိတျသဘောထားကောငျးတဲ့လူ့ဂှစာကွီးတှပေေါ့ဗြာ မှနျနတေယျဆိုရငျ ရှယျသှားလိုကျကွနျော။ credit Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ နာမည်မှာသ”ပါတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား နာမည်မှာ … Read more
FB ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စိတ်သဘောများနဲ့လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ရင်လေးစရာစရိုက်များ Fb ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ သူ့ချစ်သူမှန်း ကိုယ့်ချစ်သူမှန်း မသိဖြစ်လာတယ် သစ္စာတရား ကင်းမဲ့လာတယ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်လာတယ်။အိမ်ထောင်သယ်တွေကအပျို လူပျို လုပ်လာတယ် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ကျောင်းကန်အရောက်နဲလာတယ် စကားတွေမပီကလာပီကလာပြောမှ ခေတ်မှီတယ်အသိနဲ့ သွားကျိုးကြားကလေထွက်သလို စကားကိုမပီအောင် တမင်လုပ်ပြောလာကြတယ် Post တင်တဲ့အခါ တင်တဲ့Postကို အသေအချာမဖတ်ပဲ ပါးစပ်အရသာခံ ချောချော မချောချော အသားယူပြောတဲ့သူတွေပေါလာတယ် လူတက်ကြီးလုပ်ပီး အကြံပေးသလိုလိုနဲ့ ဝေဖန်ရေးသမားတွေပေါလာတယ် ရေးချင်တာတွေရေး postမှာ like mentရရေး အောက်ကျခံ ခင်ရင် postသစ်လာပါဦး ဆယ်လီဖြစ်ချင်ဇောတွေ များလာတယ် အိနြေ္ဒရှင် တည်ငြိမ်သူတွေ Fbပေါ် ခေတ်နောက်ကျတယ်ဖြစ်လာကြတယ် သစ္စာတရား တန်ဖိုးထားသူတွေ ပြတိုက်ရောက် ဘဝတန်ဖိုးထားသူတွေ အပစ်ခံရ … Read more
လူအမြားစု မစားဖွဈပဲ ထှေးထုတျနမေိတဲ့စပဈြသီးအစလေ့ေးတှအေကွောငျး။စပဈြသီး အစရေဲ့ အရသာက ခါးသကျသကျ စားရတာကလညျး မာဆတျဆတျနဲ့ဆိုတော့ စပဈြသီးစားတိုငျး ထှေးထုတျပဈ လိုကျတာ မြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတှေ မသိတဲ့ အခကျြ တဈခုက စပဈြသီးက သူရဲ့အစှမျးသတ်တိတှေ အကုနျလုံးကို အစထေဲ့မှာ သိမျးဆညျး ထားတာပါ။စပဈြသီး အစထေဲ့ မှာပါတဲ့ အစှမျးသတ်တိ တှကေိုသာ သိခဲ့မယျဆိုရငျ အရငျက ထှေးထုတျ ခဲ့မိတဲ့စပဈြသီးစလေ့ေးတှကေို နှမွောမိမှာ သခြော ပါတယျ ။ နိုငျငံတကာ မှာလညျး စပဈြသီးအစရေဲ့ အဆီအနှဈကို ထုတျယူပွီး ဆေးဝါး အဖွဈ ထုတျလုပျ ရောငျးခြ နတောမြိုးလညျး ရှိပါတယျ ။စပဈြသီး အစထေဲ့မှာ အရမျးကို အစှမျးထကျတဲ့ အငျတီအောကျ ဆီးဒငျ့ တဈမြိုး ပါဝငျ ပါတယျ … Read more